मस्तिष्काघात भए ६ घण्टाभित्रै इन्टरभेन्शन गरिहाल्नुपर्छ | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता मस्तिष्काघात भए ६ घण्टाभित्रै इन्टरभेन्शन गरिहाल्नुपर्छ
दिमागको नसा बन्द हुनुलाई स्ट्रोक अर्थात् मस्तिष्काघात भनिन्छ । यसलाई अहिले नेपालमै टाउको नखोलिकनै रगतको नसाबाट विशेष प्रकारको तार पठाएर नसा खोल्न सकिन्छ । यसलाई तुरुन्तै खोल्न सकियो भने पक्षाघात हुन पाउँदैन । नसा बन्द भयो भने मस्तिष्क विस्तारै मर्दै जान्छ । तर अहिले यसलाई तुरुन्तै उपचार गरे जीन्दगीभर पक्षाघात हुनबाट बचाउन सकिन्छ । टाउको नखोलिकन २–४ दिनमै घरमा जान सकिनेगरी इन्टरभेन्शन गरी उपचार गर्न सकिन्छ । अहिले डा. सुवास फुयाँल अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सबाट इन्टरभेन्शनसम्बन्धी तीनवर्षे डीएम कोर्स गरी नेपालमा आएका छन् । हाल ग्रान्डी अस्पतालमा कार्यरत फुयाँल नेपालको पहिलो डीएम न्यूरो इन्टरभेन्शन रेडियोलोजिस्ट हुन् । प्रस्तुत छ, स्ट्रोकको सेरोफेरोमा रहेर डा. फुयाँलसँग आर्थिक अभियानका प्रमुख संवाददाता पूर्णभक्त दुवालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
Rama baniya karki
good information n thank u dr. n abhiyan.com.np